प्रधानन्यायाधीश जबराले कसैलाई कार्यबाहक नताेक्ने,आफैं घरबाटै काम गर्ने! spacekhabar
प्रधानन्यायाधीश जबराले कसैलाई कार्यबाहक नताेक्ने,आफैं घरबाटै काम गर्ने!
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले सरकारी निवासबाटै सर्वोच्च अदालतका कामकाज अगाडि बढाउने तयारी थालेका छन्। सत्ता गठबन्धन पाँच दलले उनलाई बिदा बसेर कार्यबाहक तोक्न आग्रह गरेको भोलिपल्टै उनी हतारहतार अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएर निवास फर्केका छन् ।
कोरोना संक्रमणका कारणबलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी बल अस्पतालमा भर्ना भएका जबरा आज विहान डिस्चार्ज भएका हुन् । नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागिरहेको अवस्था र गठबन्धन दलले पनि कामु तोक्न प्रधानन्यायाधीशलाई आग्रह गरेपछि उनी झस्किएका छन् ।
बारले अदालत प्रवेशमा रोक लगाउँदा पनि बैकल्पिक गेटबाट अदालत प्रवेश गर्दै आएका जवरा कोरोना संक्रमण नभएको भए जबरजस्ती अदालत प्रवेश गरेर माहोललाई थप तनाबपूर्ण बनाउने थिए , बारका एक बरिष्ठ अधिवक्ताले भने । प्रधानन्यायाधीश राणालाई लागेको थियो कि केहीदिन अदालत नजाँदा केही तनाब कम होला भन्ने तर परिस्थिति ठिक उल्लटो बन्यो,स्रोतले भन्यो ।
अहिले पेसी तोक्ने मुख्य काम नै कटौती गरेर गोलाप्रथाबाट तोक्न थालिएको छ ।यो बाहेक अदालतका दैनिक काम अनलाइनबाट गर्ने उनले तयारी गरेका हुन् ।
यता, नेपाल बार एशोसिएसनले भने प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएसम्म विरोधका कार्यक्रम नरोक्ने जनाएको छ । बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएसम्म विरोधका कार्यक्रम हरेक दिन जारी रहने बताए । यही मंसिर १५ गतेबाट गोलाप्रथा लागू भएपछि कानून व्यवसायीहरु दैनिक एक घण्टा धर्ना दिएपछि मात्र इजलासमा बस्न्रे गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्यपालिकासँग भाग खोजेको भन्ने विषय सार्वजनिक भएपछि सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरुसँगै बारले उनी विरुद्ध आन्दोलन थालेको हो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर १७, २०७८, ०१:५९:००